June 2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
25/06/2020 by AHRN IT Posted in Activities
Donation of chicken boiled rice to patients and caregivers at Shwegu Township Hospital, Bhamo District, Kachin State for Fourth Anniversary of AHRN-Shwegu Clinic Opening
On 9th June 2020, staff from Asian Harm Reduction Network madeadonation of chicken boiled rice to the patients and caregivers at Shwegu Township Hospital as the commemoration of the Fourth Anniversary of the Clinic Opening in Shwegu Township. 7th June, 2016, Asian Harm Reduction Network-Myanmar opened its clinic in Shwegu Township, in accordance with the MOU from Ministry of Health and Sports and Ministry of Home Affairs. AHRN-Shwegu Clinic has been providing comprehensive harm reduction services, primary health care services and mental health services to people who use drugs, most vulnerable to acquire HIV/AIDS in Myanmar. Moreover, AHRN-Shwegu Clinic also offer health services such as, sexual and reproductive, HIV testing and counseling, TB screening and treatment in regardless of race and nationality. Community based trainings on drug use and its consequences, sexual and reproductive health and rights to the youth are also provided. The Asian Harm Reduction Network clinic was able to continue its services during the COVID-19 crisis, under strict AHRN COVID-19 prevention, infection control measures, in accordance to guidance of the Ministry of Health and Sports.
AHRN- Shwegu project is funded by Access to Health Fund.
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ရွှေကူမြို့ရှိ မြို.နယ်ပြည်သူ.ဆေးရုံတွင် ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုခံယူနေသော လူနာများနှင့် လူနာစောင့်များအား AHRN-ရွှေကူ နားခိုရာဆေးခန်း (၄) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဟာရဒါန ကြက်သားဆန်ပြုတ်တိုက်ကျွေးလှူဒါန်း။
AHRN-ရွှေကူ (နားခိုရာ ဆေးခန်း) မှ ရုံးဝန်ထမ်းသူ/သားများ စုပေါင်း၍ ရွှေကူမြို.နယ် ပြည်သူ.ဆေးရုံတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူနေသော လူနာများနှင့် လူနာစောင့်များအား AHRN- ရွှေကူ နားခိုရာဆေးခန်း (၄) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် (၉.၆.၂၀၂၀) နေ.တွင် ကြက်သားဆန်ပြုတ် အာဟာရဒါန တိုက်ကျွေးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။AHRN-ရွှေကူ အဖွဲ.သည် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနများ၏ လမ်းညွှန်သဘောတူမှု များနှင့် အညီ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၇) ရက်နေ.မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း (HIV/AIDS) ရောဂါဝေဒနာအများဆုံး ကူးစက်ခံစားနေရသော မူးယစ်ဆေးစွဲ လူနာများအား ကုလသမဂ္ဂ၏ အလုံးစုံလွှမ်းခြုံမှုရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဆက်နွယ်သော နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် လျော့ချရေး ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးခြင်း တို.အပြင် ရပ်ကွက် ကျေးရွာနေ ပြည်သူလူထုများအား အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများပေးခြင်း၊ လိင်နှင့် မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး လက်ကမ်းစောင့်ရှောက်မှုများပေးခြင်း၊ HIV ရောဂါပိုး ရှိ မရှိ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး သွေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ တီဘီ ရောဂါ ရှာဖွေ ကုသမှုပေးခြင်းတို.အား လူမျိုးမရွေး ၊ ဘာသာမရွေး၊ တိုင်ရင်းသားမရွေး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး သင်တန်း၊ လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးသင်တန်း နှင့် ကျား/မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေးသင်တန်းများ ကိုလည်း လူငယ် လူရွယ်များ အား သင်တန်းပို.ချပေးလျက် ရှိပါသည်။
ယခု Covid 19 ကမ္ဘာ.ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်လည်း AHRN-ရွှေကူ (နားခိုရာ ဆေးခန်း)မှ အထက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို လစ်ဟင်းမှု မရှိရလေအောင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအား တိကျစွာ လိုက်နာ၍ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
AHRN – ရွှေကူ နားခိုရာဆေးခန်း ကို Access To Health Fund ရံပုံငွေအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးကူညီ ပါသည်။
Advocacy Meeting and Opening Ceremony of Drug Treatment Center (DTC) in Mawlaik Township
25/06/2020 by albert wilson Posted in Activities, Home-Slider
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် AHRN တို့ပူးပေါင်း၍ မူးယစ် ဆေးစွဲကုသရေးဌာန ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် အသိပေးဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် AHRN တို့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သော မူးယစ်ဆေးစွဲကုသရေးဌာန ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် အသိပေးဆွေးနွေး ခြင်းအခမ်းအနားကို မော်လိုက်မြို့၊ ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ အစည်းအ ဝေးခန်းမ၌ ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချိုဝင်း မှ အဖွင့်မိန့်ခွန်းနှင့်တစ်ကွ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက် မက်သဒုန်း ဆေးအစားထိုးကုသမှုလုပ်ငန်းသည် အရေးကြီးကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနှင့် AHRN ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုဆို ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲ မှုကော်မတီဥက္ကဌ ဦးညီညီလွင်မှ မူးယစ်ဆေးဝါးအရေးကိစ္စသည် တစ်မျိုးသားလုံးနှင့်သက်ဆိုင် သော ကိစ္စရပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောမူးယစ် ဆေးဝါး နှင့်ဆက်နွယ်နေ သောပြဿနာရပ်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးဒေါက်တာဇော်ဝင်းထွန်းမှလည်း မူးယစ်ဆေးစွဲကုသရေးဌာနဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပက်သက်သော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများနှင့် ကုသရေး ဆိုင်ရာ နည်းလမ်း များကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် AHRN စီမံချက်မန်နေဂျာဒေါက်တာဝေယံဗိုလ်မှ AHRN မော်လိုက်ရုံး၏ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် မက်သဒုန်းတိုက်ကျွေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်မော်လိုက်ခရိုင်ပြည်သူဆေးရုံကြီးတွင် မူးယစ် ဆေးစွဲကုရေးဌာနကို ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဌနှင့်အတူ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ ကမှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားကိုခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ အကြီး အကဲများ၊ ခရိုင်မြို့နယ် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ခရိုင်မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက် အသင်းတို့မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများစသည်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို Global Fund ရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ကူညီပါသည်။
Under the leadership of the Ministry of Health and Sports (MoHS), the advocacy meeting and opening ceremony of Drug Treatment Center was held on 15th June 2020 at the Meeting Hall of District Hospital, Mawlaik Township. According to the Agenda, Daw Cho Cho Win,amember of parliament gave an opening speech of the ceremony. She said MMT is important for drug users and welcomed the coordination activities with AHRN. The District Administrator, U Nyi Nyi Lwin discussed about the drug-related issue across the Mawlaik District and stressed the importance of joint coordination of all sectors and every community to address and solve the issues at hand. The District Medical Officer, Dr. Zaw Win Htun explained his efforts for establishing the DTC in Mawlaik, the nature, and myths of drug and drug users, and better way forward in the approach for the treatment of drug users.Dr. Wai Yan Bo, Project Manager of AHRN Mawlaik explained about Mawlaik office, AHRN project activities, methadone maintenance treatment (MMT) clinic activities, and the future plans of Mawlaik AHRN office. The esteemed Daw Cho Cho Win (Member of Parliament), U Nyi Nyi Lwin (District Administrator) and local authorities of the parliament opened the Drug Treatment Center. Concluding, Dr. Wai Yan Bo Project Manager AHRN showed the dignitaries the clinic and explained the local authorities about MMT. The ceremony was attended by Government officials (MoHS, Administrative Department, District Police department, among others) and community leaders and elders.
This activity is funded by the Global Fund.
09/06/2020 by albert wilson Posted in Uncategorized